Guushii Chelsea ka gaartay Southampton oo laga diiwaan-galiyay Xaqiiqooyin kala duwan | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Guushii Chelsea ka gaartay Southampton oo laga diiwaan-galiyay Xaqiiqooyin kala duwan
kooxda Chelsea ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda southampton ciyaar ku soo dhamaaday 3-1.
Kulankaasi kadib waxaan dib u eegeynaa xaqiiqooyinka laga diiwaangaliyay kulankan.
Tan iyo markii Thomas Tuchel uu maamulay kulankiisii ​​ugu horreeyey ee Chelsea bishii Janaayo ee xilli ciyaareedkii hore, Blues waxay heshay dhibco gurigeeda Premier League marka loo eego kooxaha kale (27 kulan 14 kulan).
Southampton ayaa ku guuldarreysatay inay badiso mid kasta oo ka mid ah toddobadii kulan ee furitaanka ololaha heerka saddexaad markii saddexaad, sidoo kale waxay sidaas sameysay 1996-97 iyo 1998-99.
Chelsea ayaa dhalisay goolasha qeybtii hore ee Premier League xilli ciyaareedkan marka loo eego kooxaha kale (7), halka Trevoh Chalobah uu goolka furitaanka u ahaa kii ugu horreeyay ee Southampton laga dhaliyo qeybtii hore ee kulan horyaalka ah xilli ciyaareedkan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Southampton James Ward-Prowse 32-dii gool ee uu ka dhaliyay Premier League, 59% waxay ahaayeen laad xor ah (10) ama rigoore (9); Ciyaartoyda leh 30+ goolal tartanka, kaliya Leighton Baines (81%) iyo Mark Noble (63%) ayaa leh saami intaas la eg.
James Ward-Prowse ayaa ahaa ciyaaryahankii afaraad ee Southampton ee labaduba gool dhaliya isla markaana kaarka gaduudan isla kulan Premier League ah, kadib Pierre-Emile Højbjerg v Man City 2018, Sadio Mané v Liverpool 2015 iyo Peter Crouch v Crystal Palace 2005.
Ciyaaryahanka Chelsea Ruben Loftus-Cheek ayaa caawiyay gool Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii Luulyo 2020 v Crystal Palace, iyo markii ugu horreysay oo uu joogo Stamford Bridge tan iyo Abriil 2019 v West Ham.
Previous articleNatiijo: Brighton 0-0 Arsenal, Gunners oo bar-baro la kulantay, Guulaheeda oo la hakiyay
Next articleDaawo: Mahad Salaad oo sheegay ‘qorshe xun’ oo ay damacsan yihiin Ahlu-Sunna
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Man City ee Raheem Sterling ayaa lagu soo waramayaa in uu wali bartilmaameed u yahay kooxda Barcelona . ...